मानव अधिकार तोड्नेलाई अब के हुन्छ ? - Jana Aastha News Online Jana Aastha News Online
| Tue Sep 28 2021
मानव अधिकार तोड्नेलाई अब के हुन्छ ?
प्रकाशित मिति : १ कार्तिक २०७७, शनिबार १९:३८
मानव अधिकार आयोगले बिहिवार बेलुकी प्रकाशित गरेको सूचिअनुसार अब द्वन्द्वकालका २ सय ८८ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरू सबै खालका सरकारी नियुक्तिको लागि अयोग्य हुनेछन् । मानव अधिकार उल्लंघनलाई विकसित समाज र कानुनमा खराब आचरणको रूपमा लिइन्छ । तसर्थ,खराब आचरण भएकालाई सरकारी नियुक्ति दिने भन्ने कुरै नआउने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
सामान्यतयाः विदेश भ्रमणमा रोक नलागेपनि यसरी मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका जो सुकैलाई पनि सार्वजनिक ओहोदामा राख्न वा पुनर्नियुक्ति गर्न मिल्दैन । यस्ता उदाहरण तथा नजिर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै रहेको बताइन्छ । विशेषगरी ९० को दशकमा पूर्वी यूरोपका धेरै वटा देशमा भएका नरसंहारका घटनापछि यस्तो आरोप लागेका धेरैजनालाई पदमुक्त वा पुनर्नियुक्तिबाट वञ्चित गरिएको थियो ।
हाम्रै सन्दर्भमा पनि माओवादी र सरकारबीचको सशस्त्रद्वन्द्वमा मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका कतिपय सैनिक र प्रहरीलाई थप अवसरबाट वञ्चित गराइएको थियो । त्यसैगरी न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत उक्त विषय उठेको थियो । कसैले मानव अधिकार उल्लंघन त कसैले खराब आचरण भनेपनि उक्त विषय एउटै रहेकाले त्यसरी आरोपितहरूलाई सरकारी अवसरबाट वञ्चित गराइएको थियो ।
हाम्रै सन्दर्भमा पनि अदालतको मानहानी गरेवापत एक रुपैयाँ दण्ड तिराइएका पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीलाई त्यसउपरान्त कुनै नियुक्ति दिइएन । सरकारी पैसा तिर्न बाँकी या बेरुजुवालाको हकमा पनि कुरा उही हो ।
कानुनी भाषामा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नु भनेको संविधानको उल्लंघन,बर्खिलाप एवम् समग्र कानुनको मिच्नु हो । कानुन उल्लंघन गर्नु भनेको खराब आचरण हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले गम्भीर अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई राज्यले कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नैपर्ने हुन्छ ।
आयोगले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको सूची पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा आयोगको अध्यक्ष बनेपछि लगत्तै गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यमध्येको एक थियो । आयोगभित्रैबाट पनि उनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको सूची सार्वजनिक गर्न निकै दबाब परेको थियो । तर, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न स्वयम् आयोगका पदाधिकारीहरूले लामो समयदेखि अन्कनाइरहेका थिए ।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिनको अघिल्लो साँझमा आयोगका पदाधिकारीहरूले यस्तो निर्णय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार आयोगले सम्पन्न गर्ने अरु सबै कार्यको फेहरिस्त सरकारलाई सिफारिश गर्ने मात्र हो । तर, मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको सूचिचाँहि उसले सोझै सार्वजनिक गर्नसक्छ । अब बिहीबार सार्वजनिक भएको सूचीलाई सरकारका सबै अङ्ग,निकाय र इकाइले सँधै जानकारीमा राखेर त्यस्ता आरोपितलाई थप सरकारी सुविधा नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताइन्छ ।
श्रीमतीसङ्गै मिलेर अर्की महिलामाथि जबरजस्ती करणी
कहिले पालो दाइको, कहिले पालो भाइको
२ नम्बरमा लोसपा दलको नेता बने सोनल
मन्त्रिमण्डल विस्तार र एकीकृत समाजवादीको जोडघटाउ
“पत्रकार”सङ्ग मिल्दै पैसा उठाउने यी प्रहरी
कतै पनि नलागेर वामदेव गौतमको नयाँ पार्टी
कर्णालीमा लक्ष्य भेट्नै कठिनाइ
यस्तो हुनसक्छ मन्त्रालय भागबण्डाको प्रारुप
बालुवाटारमा अझै कुरो मिलेन,माओवादीद्वारा मन्त्री फर्काउने चेतावनी